Uncwadi ngeKrisimesi | Uncwadi lwangoku
Ngubani na ongaziyo namhlanje incwadi edumileyo "Ibali leKrisimesi" de UCharles Dickens? Mhlawumbi umazi njengo "Ingoma yeKrisimesi" o "ICanticle yeKrisimesi", kodwa iyafana. Kwabo bangekayifundi okwangoku (siyayicebisa ngamandla) bakuxelele ukuba ibalisa ngobusuku obukrakra bokuba indoda endala elusizi nenesithukuthezi u-Ebenezer Scrooge echitha usuku lweKrisimesi ngenxa yotyelelo lwe-specter yeqabane lakhe lakudala, uJacob UMarley, ohamba phambi kwakhe umbono wemimoya yexesha elidlulileyo leKrisimesi, langoku nelizayo. Iimvakalelo kunye nokubonakaliswa kolu hambo luvusayo eScrooge kuya kugqiba ukusebenza notshintsho olonwabisayo kubukho bakhe. Libali elonwabisayo kwaye ukuba ngeli xesha leKrisimesi, kungcono kakhulu.
Kodwa ayisiyiyo kuphela incwadi ethetha ngeKrisimesi okanye eyenzeka ngale mihla ikhethekileyo. Namhlanje sikulethela ezi-5 zazo, onokungazazi kwaye eziziincwadi ezilungileyo kakhulu. Hlala ne-Actualidad Literatura kwaye ufumane uncwadi oluninzi ngeKrisimesi.
1 "Isipho seMagi" ngu-O. Henry
2 "Iileta zikaSanta Claus" nguJRR Tolkien
3 "IKrisimesi yeManhattan" nguGema Samaro
4 "Indlela iGrinch eyayibambe ngayo iKrisimesi" nguGqirha Seuss
5 "Imemori yeKrisimesi" nguTruman Capote
"Isipho seMagi" ngu-O. Henry
Eyona nto uyithandayo:
UDella noJim sisibini esithandanayo esingafuniyo ukuba iKrisimesi iqhubeke ngaphandle kokuphana izipho. Kule nto kuya kufuneka bathengise into exabiseke kakhulu kubo kwaye ke bakwazi ukuthenga isipho esifunwa ngothandekayo wabo. Ibali elibonisa ukuzincama kunye neemvakalelo zokuziva uthandwa. Imizobo ebuthathaka kunye nemibongo ebhalwe nguLisbeth Zwerger ikhanyisa eli bali liethe-ethe nelichukumisayo.
"Iileta zikaSanta Claus" nguJRR Tolkien
Kubalandeli baka JRR Tolkien, incwadi encinci eyaziwayo ngumbhali:
Ihlanganisa oonobhala abaziwayo be "Lord of the Rings" ababhalele abantwana bakhe ngeKrisimesi bezenza ngathi nguSanta Claus, phakathi konyaka ka 1920 no 1943. Kuzo ubalisa ngohambo lwakhe kunye nabo babemncedisa eNorth Pole. .
"IKrisimesi yeManhattan" nguGema Samaro
Ilungele abo kuye kwafuneka bashiye ilizwe labo lokuzalwa bayokukhangela ubomi obungcono phesheya:
Kusele iintsuku ezintlanu kude kufike usuku lweKrisimesi kunye noSusana, kude nosapho kunye nabahlobo, baphose yonke into. Into angayaziyo kukuba abazicwangcisi ukumshiya yedwa kule mihla. Yiyo loo nto baya kuhamba ngeManhattan de ubomi babo bujike bube sisiphithiphithi. Isoka lakhe langaphambili liza kuvela, lizimisele ukuba liphumelele; Unina noninakhulu, baqinisekile ukuba kufuneka alishiye iqabane lakhe langoku kuba uyingozi ngakumbi; emva koko abahlobo bakhe abasenyongweni, abasele bezokwahlukana. Udadewabo uSofía uyanyamalala ngokungummangaliso kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umdlali wepiyano osisiporho uhlala endlwini yakhe kwaye utitshala wakhe ongumhlobo ufuna uncedo lwakhe ekugadeni into engaphandle komhlaba ... Nokuba kunjalo, useto olugqibeleleyo lokuba "wonwabe" ngeKrisimesi yokwenyani. Okanye hayi? Ungathini xa ukonwaba xa ungasalindelanga nto? Kuthekani ukuba emva kwazo zonke ezi yayiziiKrisimesi ezigqibeleleyo, okanye phantse, uSusana awayesoloko ephupha ngazo?
"Indlela iGrinch eyayibambe ngayo iKrisimesi" nguGqirha Seuss
UGqirha Seuss ibali labantwana apho kudluliswa ubunyani bokwenyani beKrisimesi: ayizizo izipho, ayinawo umthi olayishwe iipakeji ngoSuku lweKrisimesi, yabelana ngezihlandlo nosapho kunye nabantu obathandayo.
"Imemori yeKrisimesi" nguTruman Capote
Le ntsomi yeTruman Capote enkulu ayinakuphoswa. Ungayifumana kwincwadi enesihloko esithi "Amabali amathathu":
Izinto ezintathu ezingalibalekiyo kwimemori, zakudala, zobuntwana, zidibana apha okokuqala. Iinkumbulo ezintathu zokudibana kwakhona kosapho okubangelwe yimibhiyozo yeeholide- iiKrisimesi ezimbini kunye noMbulelo omnye-yajika yaba luncwadi olukumgangatho ophezulu ngenxa yesandla sikaTruman Capote. Kwaye uBuddy, oko kukuthi, uTruman omncinci, ngumlinganiswa ophambili kula mabali. Indima ekwabelwana ngayo kwababini ("Imemori yeKrisimesi" kunye "neNdwendwe yokuBulela") nguNkosazana Sook, isihlobo se-spinster esingaqhelekanga apho inkwenkwe yaziva isondele kakhulu kwiminyaka awayeyichitha nezihlobo ezivela kunina e-Alabama. Kwisithathu, ngeKrisimesi enye, uBuddy uya eNew Orleans ukuya kudibana notata wakhe, angamaziyo.
Zininzi ezinye iincwadi ezineKrisimesi njengeyona ndawo ibalaseleyo, yeyiphi eyona ncwadi uyithandayo ebekwe kwiKrisimesi? Hi ndlela leyi, ZIHOLI ZOLONWABO!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Uncwadi ngeKrisimesi